Google ကဒူဘိုင်းအတွက်ဂျော့ဘ်ကဒီမှာကို Join နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာ🌟🌟🌟🌟
မေလ 6, 2014
Google ကအတွက်ဂျော့ဘ် အားလုံးကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်း သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေ။
အိုင်တီအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး - Google ကဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်
Google ကဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသငျသညျမယ့်အခါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အင်တာဗျူးများအတွက် ဘို့ ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်။ သငျသညျတခုပြည်တွင်းရေးအင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းဤမေးခွန်းကိုမေးမွနျးတဲ့ပါလိမ့်မည်: "သင်သည်အဘယ်သို့အသစ်တစ်ခုအနေအထားရှာနေကြသလဲ" ဒီရက်ရှာဖွေနေ စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အ သင်ချဉ်းကပ်လာသောအခါဒါကြောင့်စူပါမခံစားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်အရာအလေးပေးမဟုတ်ပါဘူး ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများ။ သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်, ထက်အခြားထိုမေးခွန်းကိုမှတခြားဘာအဖြေကိုပေးနိုင်ပါသည် "ကျွန်မပိုပြီးငွေရှာဖို့လိုသလား?" ညာဘက်?.
Google ကယူအေအီး Careers များအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု
ကောင်းပြီ, ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများရှာနေရှာဖွေစုဆောင်း။ သင်သိသငျသညျဖို့လိုအပျ ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းထားခံရဖို့သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်တင်ဖို့ဘယ်လို။ 95% အတွက်ဒီရက် စုဆောင်းမှု ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ. Google မှာသင့်ရဲ့ငှားရမ်းမန်နေဂျာ၏ဟာသပေါ်တွင်မူတည်သည်။ A နှင့်မည်မျှကောင်းစွာအဆင့်များမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အက်ဘ်ဆိုက် ဒူဘိုင်းအတွက်ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်, ထိုအဖြေကို "ကျွန်မပိုပြီးငွေရှာချင်ပါက Google ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရွေးချယ်ဖို့သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး option ကိုမရကြလိမ့်မည် ဒူဘိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကော်ပိုရေးရှင်း။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလသင်တို့ကို အကြောင်းပြု. စူပါစမတ်ဖြစ်ဖို့ရှိသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့။ သငျသညျနည်းနည်းပိုလုံခြုံကစားခြင်းကိုစတငျဖို့လိုအပ် ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်းအလုပ်ဆိုက်များအတွက်.
ခန့်ကျယ်ပြန့်ဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများ။ ပိုမိုပွင့်လင်း box ကိုလမ်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ Google ကအတွက်အလုပ်အကိုင်များရရှိရန်မည်ကဲ့သို့စဉ်းစား ယူအေအီး။ ငါတို့သည်သင်တို့အပေါ်အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများကိုပြသပါလိမ့်မယ် အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို။ ကိုသတိရပါ, သင်သည် Google အများကြီးသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုးသားဖို့လိုပါတယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်၏လမ်းအတွက်ပိုပြီးမဟာဗျူဟာမြောက် Be နှင့်အဘို့အခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင် Google ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းအလုပ်အကိုင်များ။ အဆိုပါအစာရှောင်လမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် WhatsApp ကိုအပေါ်ဒူဘိုင်း်ထမ်းရှာဖွေသူရောက်ရှိ။ တောင်မှ Facebook သို့မဟုတ် Twitter ပေါ်တွင်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်။ ဒီတစ်ခါလည်းတစ်ဦး အထောကျအကူလက် ဆက်သွယ်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ
သငျသညျကိုရှာဖွေနေခဲ့လျှင် အတွက် ဒူဘိုင်းတွင်သတင်းအချက်အလက်သစ်များ သငျသညျယခု 2017 ၏အဖြစ်ကြောင့်သတိရဖို့ရှိသည် - 2018 မရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိ 2018 အပေါ်အလုပ်အကိုင်စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက် အလုပ်အခွအေနေတည်ငြိမ်သို့မဟုတ်မှီတိုင်အောင်ပိုပြီး Lay-off မှတ်တမ်းတင်ဆက်လက်ရှိမရှိ 2020Expo။ နေ့တိုင်းမရေမတွက်နိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ အရှေ့အလယ်ပိုင်းထံသို့ လာ. ရှာဖွေနေ: ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့။ ထွက်ရှာဖွေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်သူတို့ကို သို့ဖြစ်. 90%, သာအမြတ်အစွန်းအလုပ်အကိုင်အများအတွက် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာဘယ်လိုရှာတွေ့ ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရှာဖွေစုဆောင်း။ သင်သည်ထိုသူတို့၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏လျှင်သို့သော်, သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း / CV ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပ်လုဒ်ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်စာမျက်နှာပေါ်မှာငါတို့မိတ်ဖက်ဖို့ add ပေးပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးထိပ်တန်းငှားရမ်းကော်ပိုရေးရှင်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင် Careerjet နှင့် Monster ပင်လယ်ကွေ့က်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူနယူးက Google အလုပ်ရှာဖွေရေး Start ကို
မေးခွန်းကဘယ်လိုအကြောင်း အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့အဘို့သင့်အတွေ့အကြုံ, ယူအေအီး။ အပြုသဘောဘက်ပေါ်တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံကသင်လုံလောက်ကောင်းပါတယ်လျှင်။ ထိုသို့မန်နေဂျာငှားရမ်းအတွက်လုံလောက်သောကောင်းပါတယ်လျှင်။ လုံလောက်စွာသင်လုပ်နိုင်သည် အသစ်တစ်ခုကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်။ အဆိုပါစုဆောင်းမှုအမှုဆောင်အရာရှိအမြဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်ငှားရမ်းရန်ရှာနေ။ ရဲ့သင့်ထံမှဖြစ်ကြောင်းပြောပါစို့ ပါကစ္စတန်နှင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ကောင်းသောအခွအေနရှာဖွေနေ ယူအေအီးအတွက် ?. သင်ကအစက်အပြောက်ညာဘက်အပေါ်တစ်ဦးအလုပ်ချင် ?. ဒါပေမယ့်သင်က HR မန်နေဂျာရဲ့ရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ သေချာတာပေါ့, လူတိုင်းအတွက်ဒူဘိုင်းမီဒီယာမြို့ဥပမာကြောင်း $ 5-8k လစာချစ်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လူတိုင်းမကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရနိုင်ပြီး ပင်ကူဝိတ်ရှိသူတို့အလုပ်နေရာလွတ်ရှာတွေ့.
သို့သော်အထူးသဖြင့်ယူအေအီးအတွက်အသစ်ရဲ့အနေအထားကိုတှေ့ရရန်။ သငျသညျသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်လိုအပ်သို့မဟုတ်အဓိကအားဖြင့်ဒူဘိုင်းရည်ညွှန်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းကိုအိပ်မက်မက်။ ယူအေအီးအတွက်စျေးကြီးသောကွောငျ့ငွေပေးချေမှုအလွန်ကောင်းစွာသည်အဘယ်မှာရှိ ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများမှ ဒါဟာရေရှည်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ 2018-2019 များအတွက် Google ကအလုပ်ရှာဖွေရေး သငျသညျသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်အနေနဲ့အင်အားစိုက်ထုတ်စွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲရန်ရှိသည်များနှင့် ဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှုအဘို့ပြင်ဆင်ရမည်.
Google ကအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒူဘိုင်းအတွက် Google ကဂျော့ဘ်အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာမည်
အဲဒီအစားအလုပ်ရှာဖွေ၏လအနည်းငယ်ဖြုန်းနှင့် Google ဒူဘိုင်းရှာဖွေစုဆောင်းရှာဖွေနေ၏။ အသစ်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပွဲချင်းပြီးဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပေးခြင်းသူကိုကုမ္ပဏီများတွင်စတင်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာစတင်နိုင်ပါသည် ပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန် နှင့်ငါတို့နှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများသည်ကိုရှာပါ။ သူတို့ဖြစ်ကြသည်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေသူများအံ့သြဖွယ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည် ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်သစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလာပြီ စီးတီးစူပါအစာရှောင်ခြင်း။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားသော၏ဧရိယာဖုံးလွှမ်း အသုံးပြုမှုအတွက်မန်နေဂျာနှင့်အလုပ်အကိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များငှားရမ်း.
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းကိုဂရုစိုက်ကြောင်း 100% သေချာပါသည်။ တဖန်သင်တို့များမှာ 2018 သို့မဟုတ် 2019 အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ။ တိုင်းယူအေအီးအလုပ်ရှာဖွေသူကထိုက်တန်ပါတယ်။ အကြောင်းမူကား, သင်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကိုဘယ်လိုအတူစကားပြောနိုင်သည် ကျနော်တို့မွန်ဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှင်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်နေကြသည် နှင့်ယူအေအီးအတွက် Google ကရှာဖွေစုဆောင်းကိုညွှန်ကြား။ အဘယ်သို့ကျွန်တော်တစ်ဦးရရှိရန်သင်၏အလုပ် applications များတွန်းနိုင်ပါတယ် Google ကဒူဘိုင်းမှာအလုပ်.
သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ပဲလုလင်ပျိုသို့မဟုတ်ပင် GCC တပြင်လုံးကို GCC ရှိမရှိ, သင်သည်သင်၏အိုင်တီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့ရာအရပျဆုံးဖြတ်ခင်မှာ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဤအသစ်သောအိုင်တီစီမံကိန်းကိုစတင်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အချိန်ကိုက်။
အင်တာဗျူးအစဉ်အမြဲအဘို့သင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှင်းပြ ဒူဘိုင်းတွင်အိုင်တီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ. ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အလုပ်လျှောက်လွှာကနေအားလုံးအသေးစိတ်။ အများစုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဒူဘိုင်းအတွက် HR မန်နေဂျာများ လူတစ်ဦးကြောင့်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူသို့မဟုတ်သူမစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ကသူတို့ကိုငှားရမ်းနေအခါ။ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေနှင့်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအနေနဲ့အလုပ်လုပ်လျှောက်ထား။ ရုံလစာထက် ပို. အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါက Google ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်ပါပဲ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးကဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်ဒူဘိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု၌ဤအလုပ်က်ဘ်ဆိုက် Assuage ။ အဘို့သင့်အင်တာဗျူးတွင် ဒူဘိုင်းအတွက် GOOG မီဒီယာအလုပ်အကိုင်များ သငျသညျလှုံ့ဆျောသောအရာကိုဖော်ပြပါ။ တဖန်သင်တို့တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပုံကို ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ပြည်ပရှိ Google က၌။ ဒီအနေအထားသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှထွက်ကစားကြောင်း။
သူတို့အခွအေနမြေိုး, မန်နေဂျာများငှားရမ်းသင်၌မိမိတို့၏အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆိုလိုသည်။ သူတို့ရိုးရိုးဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများအပြေးနေကြလို့ပဲ။ အဘယ်သူမျှမတံခါးကိုအထဲကသူသို့မဟုတ်သူမ၏အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းလျှောက်ကြည့်ဖို့ likes ။ သင်သည်အခြားစတင်သုံးစွဲအထူးသဖြင့်လျှင် ဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှုများအတွက်အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များ ဒူဘိုင်းတွင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အိုင်တီရှာဖွေစုဆောင်း။ ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကကဲ့သို့အခြားကုမ္ပဏီ၏စီးဆင်းမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် အကယ်. ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ။ သငျသညျအနညျးငယျလေးစားမှုကိုပြသသင့်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အမှန်တကယ်ထားရှိခံရဖို့ရှာဖွေနေလျှင်။ သင်အမြဲ WhatsApp ကိုအပေါ်ငှားရမ်းမန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဖုန်းနံပါတ်ခေါ် အဆိုပါ website တွင်ပေးအပ်.
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, Google ကအလုပ်ရှာဖွေရေး သင့်ရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဖော်ပြထားခြင်းကောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်မည်သို့သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြီးထွားလာသို့မဟုတ်တည်ဆောက်ခြင်းကိုတွေ့မြင် at Google ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘို့အညာဘက်ကိုမထိုက်မတန်မယ့်တစ်ဦးကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အက်ဘ်ဆိုက်။ သင်တန်း၏, သငျသညျအထူးသနေ, မဟုတ်လျှင်သင်ရှည်လျား site ကိုများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကအလုပ်က်ဘ်ဆိုဒ်ထဲမှာနေတဲ့လက္ခဏာလို့တော့ဘာမှအကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများကအတွင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်လျှောက်ထား။ သို့မဟုတ်ပင်ရေတိုရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများအတွက်ကို web site ကိုရှာဖွေနေ။
အားလုံးသင့်ရဲ့ပိုမိုနီးကပ်စွာ Get ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခင်မှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အက်ဘ်ဆိုက်။ မဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်ယူအေအီးပဲ Google ကအိုင်တီရာထူးမီဒီယာအလုပ်အကိုင်များမည်လောသင်ဒူဘိုင်းစီမံကိန်းကို၌ဤခက်ခဲတဲ့အသစ်များကိုစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှအပေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ယင်းကိုစဉ်းစားပါ တစ်ဦးသူနာပြုအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ စွန့်စားမှု။ သင်လိုအပ်ခဲ့လျှင် အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန် အစိုးရကြိုးစားရန် ဒူဘိုင်းအလုပ်ပေါ်တယ်s ။ သို့သော်ဤအလုပ်များအတွက်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည် ပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာဖွေနေစတင်ရန် in ဒူဘိုင်းအလုပ်။ သင်တို့မူကားအံ့သြဖွယ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူပါလိမ့်မယ်သင်ယူအေအီးအတွက်အခြားအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိကနေလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကျော်ကူညီပေးသည် 50,000 ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ - ဒူဘိုင်းမြို့ယဉ်ကျေးမှုGoogle ကအလုပ်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ t အတွက်ဒူဘိုင်းရှိဂျော့ဘ်, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီးအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုမှာအလုပ်ရှာဖွေရေး, ယူအေအီး, စျေးကွက်အတွက် Google ကကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်များသူကဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအလုပ်အကိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ.
ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင့်ရဲ့ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး site ကိုတစ်လူသိလျှင်တစ်ဦးသာရှိပြီးခြားနားချက်စေမည် ဒူဘိုင်းနှင့်ကာတာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အလုပ်ပေါ်တယ်။ တစ်များအတွက်ပြဇာတ်ရုံပရိသတ်ကိုအတူ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမြဲရှိတယ် အသက်တာ၏အပိုဆောင်းအသိအလုပ်အကိုင်စိန်ခေါ်မှုကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်။ ထိုအခါအလုပ်ရှာဖွေသူသကဲ့သို့သင်တို့သတိထားရပါမည်။ GCC အတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဆိုဒ်များသို့မဟုတ်မြင့်မားသော rated အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီကိုရှာဖွေသင်သည် "များအတွက် tools တွေကိုအဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အယ်လ်ဂျီးရီးယားအဖြစ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ဒူဘိုင်းကိုသွားဖို့ဘယ်လို"။
ဒူဘိုင်းမှာနိုင်ငံခြားရေးအလုပ်ရှာဖွေရေး Google က။ နှင့်ဂျော့ဘ် ဒီအံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီအတွက်။ အမေရိကန်နှင့်ဥရောပထက်အများကြီးကွာခြားသည်။ သို့သော်အလွန်ဆင်တူသည် ဆော်ဒီအာရေဗျအလုပ်အဖွင့် အဆောက်အဦများ။ သငျသညျအတော်လေးကြာမြင့်စွာလေ့ကျင့်ရေးအတှကျတကျရောကျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရုံမှ Google မှာတစ်ဦးကယောဘရ။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာရိုးရှင်းတဲ့ Google က join ဖို့ထင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ 2-4 ရက်သတ္တပတ်အတွင်း။ ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများန်ထမ်းဆိုတော့သူတို့ကိုထစေခြင်းနှင့်တစ်ပတ်အတွင်း running ။ ဥပမာအားကျိန်းသေထွက်ရှာတွေ့ဖို့အချိန်ယူ ဒူဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ Google ကဂျော့ဘ် သငျသညျကျော်လွန်အများအပြားအရင်းအမြစ်များကိုတိုင်ပင်ဖို့အတှကျအမှုကြောင့်သောအလုပ်တခုကို "မနေ့က" ကိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်သည်ကို Google။ သို့သော်ငြားလည်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာဒါကြောင့်သင့်ထံမှမဟုတ်ဘဲတခြားကနေကျော်ကွပ်မျက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းရဲ့ လုံခြုံရေးလယ်ပြင်၌ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ.
ဒူဘိုင်းဂျော့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူ Google ကအတွက်ဂျော့ဘ်
ဒီတော့ပိုပြီးရှာနေစတင်ရန် ပြည်တော်ပြန်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်. Google ကကြော်ငြာထဲမှာဂျော့ဘ်များအတွက်စံဒေသခံတဦးတည်းမဟုတ်ပဲ။ ဒူဘိုင်းအတွင်းပထမဆုံးစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများသည်။ အမြဲအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်ပို့စ်တင်နေကြသည်။ ရေတွင်း-branded ကုမ္ပဏီများမှကျော်သာ ဒူဘိုင်းအတွက်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် Bayt.com သို့မဟုတ်အစိုးရ related ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျကို Google နဲ့တူကြီးတွေအမှတ်တံဆိပ်များမှာအကြံပြုအပ်ပါသည်။ IT နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောနှင့် အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှုစျေးကွက် အစဉ်အမြဲပွင့်လင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်အိန္ဒိယကနေအိုင်တီအထူးကုများကလွှမ်းမိုးနေသည်ကိုသိသည်။ အသစ်ကအစပျိုးတဲ့စီးရီး စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အအေဂျင်စီများအနေဖြင့်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးသည်အများအတွက် ယူအေအီးအလုပ် Finder စတင်ခဲ့ပြီး။ ထိုအခါစျေးကွက်နီးပါးမည်သည့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အမုဆိုးများအတွက်နည်းပညာနှင့် IT လုပ်ငန်းလှသောပွင့်လင်းဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်ယခုပင် Philipino အလုပ်ရှာသူများ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ ဈေးကွက်။ အခြားတစ်ဖက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်။ အမြဲလက်ျာလူတစ်ဦးအတွက် Google အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများကိုရပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးအလွန်ကြီးမားသော ကော်ပိုရေးရှင်းဟာအဘို့အကွာဟချက်ကိုဖြည့်ရမယ် ဒူဘိုင်းစုဆောင်းမှုနှင့် ကလေးတွေ.
ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကဂျော့ဘ်
သငျသညျကို Google ရှာနေကြသည်နေကြတယ် တောင်အာဖရိကကနေဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ?. Or ဒူဘိုင်းမီဒီယာမွို့၌အလုပ်အကိုင်များ။ ဤသည်၌, ထိုကိစ္စတွင်မှအများကြီးပိုခက်ပါလိမ့်မည် အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူရိုးသားဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အများဆုံးအလုပ်လူတစ်ဦးအိန္ဒိယကနေလာပါတယ်။ သင်အလုပ်ရှာဖွေရေးစနစ်ကပျောက်ဆုံးနေခံစားရတယ်. စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ယူအေအီးအတွက် Google ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရလွယ်ကူသောမရှိကြပေ။ သို့သော်အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ကအတွေ့အကြုံမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ Google ကစုဆောင်းမှုပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့မဟုတ်ပင် ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူများ ဒူဘိုင်းထံသို့လာ. Google ကဦးခေါင်းရုံး အကောင်းတစ်ဦးအင်တာဗျူးအဘို့အပြေးလမ်းကြိုဆိုသည်။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် အလုပ်အကိုင်အစစ်ဆေး ရှာဖွေရေးဆိုဒ်များဒူဘိုင်းရှိအိုင်တီကုမ္ပဏီများ ဂိမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုတိုက်ရိုက်အတွက် Google က hit နိုငျပုံကိုစီစဉ်။
ဒူဘိုင်းအတွက် Google က်ထမ်းခေါ်ယူမှုကုမ္ပဏီများတွင်ဂျော့ဘ်
သင်နှင့်အတူအင်တာဗျူးအဘို့အသွားကြသည်ဘာပဲ မိုဘိုင်းဖုန်း ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက သငျသညျပွုပါမညျတစျခုစီစီမံကိန်းကိုအပေါ်တစ်ဦးကြီးကြပ်ရေးမှူးရှိကြလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့ သင်တို့အဘို့အဆင်သင့်မရင့်ကြောင်းညွှန်ပြပေးသော (ဆန့်ကျင်အဖြစ် "ကျွန်မသွားခင်မှာ! .. " Dubai စုဆောင်းမှု နှင့် ဒူဘိုင်းရှာဖွေစုဆောင်း. အလုပ်ချင်းစီအလုပ်လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အကောင်းဆုံးရရန်ဖြစ်ပါသည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များ, သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ်ငှားရမ်းကျွမ်းကျင်သူများတိုင်ပင်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေ၏အအောင်မြင်ဆုံးရလဒ်မှီကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအရာအားလုံးထက်အမြဲ seaming ဖြစ်ပါတယ် လုပ်ဖို့အကောင်းတစ်စိတ်ကူး.
သငျသညျနောက်ဆုံးတော့သင့်ရဲ့အလုပ်ခံယူလျှင်ပင်ပူဇော်သင်အမြဲမှာနက်ရှိုင်းသောကြည့်သင့်ပါတယ် WhatsApp ကိုများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်များ။ အမြဲတစ်ဦးစေလွှတ်မည် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအားအလုပ်လျှောက်လွှာ. အချိန်သင်တန်း၏ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါ။ 500 ကျော်ရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အတွင်ကျယ်စွာ မင်းအတွက်။ တောင်မှ အသုံးပြု. ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ ခွဲခြားစာမျက်နှာများနှင့် ချဉ်းကပ်နည်း ဒူဘိုင်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များ. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆည်းပူးကူညီပေးပါမည် ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း site ကိုအတွင်းဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှု. ဒါကြောင့်သင်ကမြေပြင်ကိုထိဖို့ကိုပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစကားလုံးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသိအထူးနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည် ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး site ကို နှင့်အလားတူနှင့်အတူအပြေး၌များစွာသောပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည် ယူအေအီး စုဆောင်းမှုတာဝန်များကို အနာဂတ္မွာ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင့်ရဲ့အတွင်းဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးအဖြစ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလုပ်ရှာဖွေဘို့ကျွမ်းကျင်သူများအကွံဉာဏျ။ သငျသညျပျက်ကွက်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက် setting ကိုရှောင်ရှားရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ မကောင်းတဲ့အသုံးပြုခြင်း စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ အဘယ်သူသည်သင်တို့ဆီသို့န်ဆောင်မှုကယ်နှုတ်တော်မူမည်မဟုတ်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ယူဆသင့်တယ်မဆိုလိုပါ အလုပ်လျှောက်လွှာ အသစ်အများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မဟုတ်နေသည် GCC အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ သင်တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်, ဖြစ်စေလမ်းစေခြင်းမပြုမီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏န်ဆောင်မှုကိုစတင်သုံးစွဲမည်သို့ပင်ကိုစုသိမ်းရန်ကြိုးစား ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေနေသည်သင်၏အလုပ်အတွက်အလုံအလောက်သတင်းအချက်အလက်။ ရိုးရှင်းစွာအသင်တစ်ဦးမှသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုကြည့်ဖို့ ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကို။ နှင့်အဆုံး၌, သတိရ: သင်ဖြစ်ကောင်းသင်ပင်နားလည်သဘောပေါက်ထက်ပိုပြီးအဘို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
သင်ရှာနေလျှင်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် cryptocurrency ဈေးကွက်ထဲမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းသူကုမ္ပဏီ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, Google ကအလုပ်ရှာဖွေရေးဒူဘိုင်း ယူအေအီးမှာထိပ်တန်းအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ Google ကကုမ္ပဏီရှိသူတို့အခွအေနေအလုပ်လက်အောက်တွင်, ဒူဘိုင်းဟာအိုင်တီအလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဖို့ရှာကြသည်တယျ။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, သင်သည်သူတို့၏ website တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ခေါ်ခဲ့သည် ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကအလုပ်ရှာဖွေရေး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်မင်းတို့အားလုံးကိုလိုချင်ပါတယ် သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး။ ဒါပေမယ့်အမြဲသင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတှေ့နိုငျကွောငျးသတိရ WhatsApp ကို messenger ကိုသုံးပြီး.
အဆိုအရ ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်အကိုင်စျေးကွက်။ ဒူဘိုင်းမြို့ Google ပေါ်တွင်အသစ်ကဂျော့ဘ်စတင်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းကိုသင်တစ်ဦးက New ရာထူးအတွက်ရှာဖွေနေပါသလား? ဘယ်လိုထွက်ရှာမည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိသစ်တစ်ခုအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ရန် အကောင်းဆုံးကိုကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သင်တို့တွင် 100% ကျေနပ်မှုအာမခံချက်ရှိနိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဘို့သင့်အလုပ်အကိုင်သုတေသန။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်း 100% စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှရုံတစ်လျှောက်လွှာပေးပို့နှင့်အဆုံး၌ပေးညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဖြစ်ပါတယ်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ကျော်ရှိမည်မျှဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာမှာကြည့်ဖူး Facebook နှင့် LinkedIn အပေါ်.
LinkedIn ကျော် 30,000 နောက်လိုက်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ! - ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ဂျော့ - WhatsApp ကိုအပေါ်အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့််ထမ်းခေါ်ယူမှုအကူအညီနဲ့။ Job Vacancies Finder နှင့်ယူအေအီးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်များ။ Dubai City Company သည် Linkedin တွင်ထိပ်တန်းဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်ပါ။ 50,358 ကျော် Likes · 25,680 ငါတို့အကြောင်းပြောနေတာ။ Dubai City Company - မင်းကိုကူညီမယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်တင်ပါ ပင်သင်၏အဘို့သင်၏အတွေ့အကြုံကို အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာကားမောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း. အမှုဆောင်ခြင်း သူများသည်အဘယ်သူသည် ဝတ်ပြု ကျွန်တော်တို့ကို: "၏ယဉ်ကျေးမှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, ယူအေအီးနှင့်ဗြိတိန်တွင်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကနေမောင်းထုတ်
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်ကျေးဇူးပြုပြီး ဝေစု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး သို့ အခြားကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတွေအလုပ်ရှာဖွေတာကိုကူညီ။ ထိုအ LinkedIn အပေါ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိ
ဤအချက်များပေးထားပေါ်တွင်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့တခြားသူတွေကိုကူညီ LinkedIn တို့ အဘယ်သူသည်ရှိစေခြင်းငှါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ ဒူဘိုင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများကို!
အဲဒီအစားအိုင်တီကုမ္ပဏီများသည်ထက် သာ. ကောင်း၏။ သင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေချင်ပါတယ် ဒူဘိုင်းဟိုတယ်ယောဘ?.
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ အဆိုပါအမြန်ဆုံးမှ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာ!